Madaxweynaha oo loogu hanjabay inqilaab hadaanu furin shirka - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Madaxweynaha oo loogu hanjabay inqilaab hadaanu furin shirka
Kadib hanjabaad uga timi madaxweynaha Somaliya kooxda sheegata beesha caalamka ayaa loo ogolaaday raiisal wasaarihii hore inuu furo shirka maamul jufeedyada. Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu eedeeyay inuu lunsaday dhulkii ciidamada, kiiskaas oo welli yaala.
”Hanjabaada ayaa madaxweynaha ugu timi Maraykanka iyo kuwa ku daba dhegan waxana mid taas la mida loo direy madaxweynaha Koofur galbeed Laftagareen, ayadoo kala guur lagu jiro, waxa lagu qasbanaaday in la fududeeyo shirka ayuu yiri Cali Calasow. Warar sheegaya in inqilaab toos loogu hanjabay madaxweynaha
Mar kale waxay muujinaysaa sida loogu xadgudbayo madax banaanida ayadoo laga faaiideysanayo xilliga kala guurka laakiin tan marnaba ma dhacdeen haddii doorashadu dhici lahayd waqigeedii ayuu raaciyay Cali Calasow.
Xataa haddii laga qayb geli lahaa shirka madaxweynaha ku baaqay, waxa kooxdu ku mijaxaabin lahayd inay laaluushto kuwa iyaga taageersan sida horjooge Siciid Deni iyo Axmed Madoobe oo Kiiniya ku hayso Kismaayo.
Si kastaba markaas fiiriyo uma banaana fursad uu madaxweynuhu ku fuliyo amarka iyo kala dambeynta waana waxa ay u jecelyihiin in dalku ahaado maamul jufeedyada una diidan yihiin in Kiiniya dalka laga saaro ayuu yiri Xuseen Warsame.